I-Live Center w/ I-Hot tub, i-Fire Pit e-Joshua Tree - I-Airbnb
I-Live Center w/ I-Hot tub, i-Fire Pit e-Joshua Tree
Indawo yethu yokuphumula ogwadule ehlane ecatshangwe kahle isendaweni ephakathi kwe-Downtown Joshua Tree ne-Joshua Tree National Park.
Indlu isendaweni ekahle kakhulu yokujabulela konke okuhlinzekwa yidolobha futhi isakwazi ukujabulela indawo ephumule ogwadule endaweni yethu yangaphandle.
Sikumema ukuthi uphumule nxazonke kuma-hammock ethu noma uhlale uzungeze umlilo futhi ujabulele isibhakabhaka esihle sasebusuku.
+ + Sicela uqaphele ukuthi le ndlu isanda kushintsha izinkampani zokuphatha futhi yalahlekelwa eminye iminyaka engu-2 yokushiwo abanye kwezinkanyezi ezingu-5. Sifake ezimbalwa ezithombeni zokubuka kwakho okushiwo abanye kule ndlu+ +
Kunamakamelo okulala angu-2 kanye negumbi lokugezela elingu-1 elinamalungiselelo okulala antofontofo abantu abangu-5; imibhede emikhulu engu-2 nosofa omkhulu.
Yenza konke ongakwenza ekuvakasheni kwakho ogwadule okunethezekile ngamasevisi ethu angaphandle ahlanganisa ama-hammock, izihlalo ezijingayo, inkundla yezinkanyezi nomgodi womlilo.
Imizila yokuqwala izintaba ikude ngemizuzu engu- futhi iyashesha ukuya kuzo zonke izindawo zokudlela nezitolo eziyingqayizivele ezisedolobheni iJoshua Tree.
AMASEVISI AFAKIWE EZIVAKASHI ZETHU:
• I-YOGA esekhaya yangasese Ufuna ukuba nokokuzithokozisa kwe-yoga OKUZIMELE
ku-Airbnb yethu? Sicela ubuze lapho ubhukha futhi sizokuhlelela i-yoga yasendaweni ekuvakasheni kwakho okunokuthula ogwadule.
• UKUBHUCUNGWA KOMZIMBA EKHAYA OKUZIMELE
Ufuna ukuvuka eJoshua Tree futhi ube nesidingo sokuza ngokuqondile ekhaya lakho leholide? Sinalo lokho kuxhumana! Sicela ubuze lapho ubhukha futhi sizokusiza ukukuxhumanisa ne-mseuse yakho yangasese.
• UMQONDISI WOKUQWALA IZINTABA WANGASESE
Ufuna ukuhlola indawo nazo zonke izindawo eziyimfihlo zokuhamba ngezinyawo abantu bendawo abazisebenzisayo? Awufuni ukushayela ungene e-National Park kodwa ufuna ukukwazi ukubona indawo enhle ezungeze ikhaya? Singakuxhumanisa nomqondisi wendawo wokuqwala izintaba ongahlela uhambo ngokusekelwe kulokho okuthandayo nengxenye engcono kakhulu.. izikhathi eziningi ukuhamba ngezinyawo kuqala emnyango wakho wangaphambili!
• UKUZINDLA KWANGASESE EKHAYA, i-Reiki & UBHAVU WOMSINDO
Xhumana nomphefumulo wakho phakathi nokuhlala kwakho ogwadule. Jabulela iseshini yangasese noma yeqembu elincane ye-kundalini yoga, ukuzindla, kanye/noma ukugeza okuzwakalayo ngothisha wangasese nomqondisi wamandla. Amaseshini okuxhumanisa amandla e-reiki nawo ayatholakala. Sicela uqiniseke ukuthi ushaya ucingo noma uthumele i-imeyili futhi uhlele okungenani amahora angu-24 kusengaphambili.
• UMPHEKI WANGASESE
Ufuna ukwenza umcimbi wesidlo sakusihlwa ozokhumbula? Sikuvikele! Umpheki wethu wangasese umane nje engcono kakhulu futhi angakwazi ukunakekela ukuthi noma yikuphi okudingayo ngokuqondene nokudla kwakho. Sicela ubuze nathi futhi singakwethula kuye.
Amasevisi engeziwe afakwa njalo, sicela usazise ukuthi unesithakazelo ngokubhukha okuqinisekisiwe futhi singasiza ngezethulo!
I-HDTV engu-55" ene- I-HBO Max, I-Netflix, I-Roku, Hulu, I-Amazon Prime Video
4.86 · 155 okushiwo abanye
Ngaphansi kwemizuzu engu-10 uhamba ngemoto ukuya emnyango we-Joshua Tree National park futhi amamayela angu- ½ ukusuka ezindaweni zokudlela ezinhle nezitolo ezijabulisayo e-Joshua Tree.
I-Joshua Tree National Park - I-Luxe Casita itholakala ngaphansi kwemizuzu engu-10 uma uhamba ngemoto ukuya endaweni yokungena epaki likaZwelonke. Imali yokungena epaki ngu- $ 20 wosuku noma u- $ 30 wokudluliselwa konyaka. Kukhona izinsuku ezithile zokungena zamahhala ngakho qiniseka ukuthi uhlola iwebhusayithi ngalezi zinsuku.
Umbukiso we-Purifoy - Umbukiso wobuciko wangaphandle usekude ngemizuzu engu-10-15 futhi kumelwe ubone bonke abathandi bezobuciko. Ukufakwa kwakhe kube ngamagalari ezweni lonke futhi lo mbukiso ubufakazi bangempela ngomsebenzi wakhe omangalisayo.
I-The Integratron - Lokhu okokuzithokozisa komsindo ongenakulibaleka kulabo abafuna ukuphumula okujulile nokuvuselelwa. Amagumbi okugeza azwakalayo ngokuqokwa kuphela ngokubhukha ku-inthanethi noma ngocingo. I- Integratron itholakala cishe emizuzwini engu-20 ukusuka futhi ibiza yonke imizuzu.
I-Landers Brew Co - Uma ufuna ubhiya omuhle, ozungezwe indawo enhle yasogwadule, i-LBC iyindawo. Ngabasebenzi bebha abanobungane kanye nokukhetha okuhle kwamaciko namabhodlela, awukwazi ukuhamba kahle. Nakanjani kumelwe kubathandi bebhiya. Ukushayela imizuzu engu-20 kuyakufanelekela ukujabulela ubhiya kuvulande noma ulalele umculo odlalwa bukhoma wasendaweni.
Izindawo zokudlela e-Joshua Tree ziyamangalisa. Ikhishi Lezwe lilungele isidlo sasekuseni esiconsisa amathe nokudla kwasekhaya okuphekiwe. I-Crossroads Cafe iyindawo yokudlela isidlo sasekuseni nesidlo sasemini esishisayo enezinhlobonhlobo zezinketho, okuhlanganisa imifino/ongakhetha kukho kwabantu abangayidli inyama nemifino. I-Pie For The People is hand down the best pizza in town, thegarlic knots are too sweetlicious! Ama-Natural Sisters yindawo yokudlela yabangayidli inyama eJoshua Tree futhi inezingxenye ezinkulu namasaladi anenhliziyo. U-Joshua Tree Saloon uhlezi phansi emgwaqweni futhi uyindawo ekahle kakhulu yomculo obukhoma, iziphuzo futhi uqiniseke ukuthi une-BBQ noma i-Mahi Mahi tacos. I-Pappy ne-Harriets e-Pioneertown indawo edumile emhlabeni yabathandi bomculo. Situsa kakhulu ukuthi ubhukhe kusengaphambili ukuze uthole itafula.
Sithanda ukuhlonipha ubumfihlo besivakashi sethu, ukuze ungasiboni okuningi. Sizotholakala ukuze siphendule noma imiphi imibuzo futhi senze ukuhlala kwakho kujabulise kakhudlwana.